ဘယ်လိုကြောင့်လုံ့လဝီရိယရှိဒေတာများ ROOM တွင်ညာဘက်သင်၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တိုင်းကိုကူညီပါနိုင်သလား | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
စက်တင်ဘာလ 2, 2019 မောင်းသူ အသက်, အခြား 0
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနညျးလမျးမြား၏နိဒါန်းလုပ်ငန်းမန်နေဂျင်းမြှင့်တင်ရန်တစ်ခုစျေးနှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့်ရေရှည်စီမံကိန်း, အကြီးတန်းအုပ်ချုပ်မှုကနေလာမယ့်သိသာထင်ရှားသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပေါင်းအပြောင်းအလဲများကိုလိုအပ်, ဒါပေမယ့်သက်ရောက်မှုသိသိသာသာအပြင်ကုန်ကျစရိတ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စျေးကွက်အတွက်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ခွင့်ပြုဖို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်များ၏သော graphical အမျိုးအစားများ၏တည်ရှိမှုကိုသင်ဖက်ရှင်အတွက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်ကွပ်မျက်အတွက်ဝန်ထမ်းကျင့်ညွှန်ကြားပေးခြင်းခွင့်ပြု, and also will help staff to change the anticipated and learn find out how to do the operate to obtain the essential results, makes the basis regarding quick plus accurate control over execution at any stage, makes the basis designed for computerization, mechanization, and software of the right activity. Most of us recommend that you integrate modern tools into your company.
Are you aware about the daily life of data room services? Online Data Room is an analog associated with cloud storage area, but it is able to do much more valuable functions for every business. We can manage enterprise processes, getagrip on relations together with investors and even partners, prepare financial reviews and observe staff effectiveness in secure virtual data rooms. If you are up against the need to lower the company’s staff, you must first understand that reducing recruiting isavery dangerous business, and so ill-conceived selections can cause wonderful damage to the business. Regardless of the aim and final result, downsizing can beabig enhancements made on the company’s OS ကို-STORE လေ့ကျင့်ခန်း. အီလက်ထရောနစ်ဒေတာများကိုအခန်းများကိုသင်န်ထမ်းလျော့ချကိုကူညီခဲ့, ပေမယ့်စနစ်တကျသင့်ကုမ္ပဏီစောင့်ရှောက်.
Virtual Dataroom ငါ့ထံသို့အထောကျအကူဖွစျလိမျ့မညျဘယျကွောငျ့အဖို့အမျှ?
အများအားဖြင့်, အလုပ်ရှင်များကိုရိုးရှင်းစွာလုပ်သားအင်အားလျှော့ချခြင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အငယျဆုံးသောငွေပမာဏအားဖြင့်ထိုအတူထိရောက်မှုတင်ပြခြင်းဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချချင်ပါတယ်. virtual ဒေတာများကို ROOM တွင်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီန်ထမ်းများနှင့်လူမျိုး၏စုံ၏ထိရောက်မှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. ရံဖန်ရံခါလျှော့ချခြင်းဟာစီးပွားရေးအခွအေနကေို၏ရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်း – အလုပ်ရှင်ယာယီမျိုးဆက် volumes ကို Web-site ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ယခင်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်ရရှိရန်လျင်မြန်စွာရရှိရန်ပုဂ္ဂိုလ်များလျော့ကျစေပါတယ်. လျော့ချရေးဒီလိုမျိုးနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်တိုင်းလူတစ်ဦးပစ်ခတ်မဟုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်နိုင်သည်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ရာမဟုတ်နေစဉ်အသိပညာကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောကြောင့်. Virtual ဒေတာများကိုအခန်းများ Secure လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်မန်နေဂျာများအတွက်ဆန်းသစ်လက်ထောက်ဖြစ်ပါသည်, which allows one to conduct economic and other sorts of business sales.
You should always be recent with all the occurrences in your business withaelectronic data space. Notifications of recent documents started “Daily inside the morning” or perhaps “Daily inside the evening” will be processed from 8 some sort of. m. or even 8 s ကို. m. according to the user’s time-zone settings. The particular setting for the purpose of full job administrators will probably be “Send notifications about uploaded and deleted documents” plus the additional environment “Notify concerning documents published and wiped by me”. The latter will be useful for pursuing your exercises in the room. Regarding using Q&A categories inavery room, customers responsible for several categories must setaDirect Addressed notification to receive warning announcement messages only from the types assigned for them.
In the settings of most Secure Virtual Data Rooms, options for activating/deactivating automatic numbering, စီမံကိန်းအမည်ပြောင်းနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲသူအဘို့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်များသောအားဖြင့်တင်ပြကြသည်, တင်းကျပ်စွာတာဝန်သို့မဟုတ် archive ကိုနှင့်အမိန့်ဟာ Adobe Flash drive ကိုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းလုပ်ရပ်များအတွက်စာရင်းဇယားရှိခြင်း. ဤသည်တိကျသောအင်္ဂါရပ်အများအပြားကို virtual အချက်အလက်ကိုအခန်းမျှသာရရှိနိုင်. သငျသညျ directory များဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အချက်အလက်လည်းရနိုင်, ဤလူမဖျက်ပစ်, ပေါင်းစပ်ပြီး, ရွေ့လျား, ဖြည်, စောင့်ကြည့်, ဒေါင်းလုပ်စာရွက်စာတမ်းများ, အွန်လိုင်းဖိုင်တွေခွဲခြားစိတ်ဖြာ, သင့်ရဲ့ Recycle Bin ကနေဒေတာတွေကိုပြုပြင်တာတွေ, ဖိုင်တွဲတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း, renaming documents together withaproject, determining permissions, transferring the Job Index and even folder contents, writing tips and attaching documents to questions in the Q&A area, sending out notices about specific documents.
Samsung က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု နည်းပညာ စီပီယူ ပရိုဆက်ဆာ ဥပဒေရေးရာအနက် OS ကို-STORE Technology_Internet စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Software များ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု HTC က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က Nokia က HD Graphics device ကိုမော်ဒယ် 64-နည်းနည်းက Windows processor ​​ကို
processor ​​ကို Intel က Server ကို စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Samsung က မိုဘိုင်းဖုန်း ဥပဒေရေးရာအနက် Intel က Nokia က HD Graphics device ကိုမော်ဒယ် Qualcomm မှ Samsung ရဲ့ Galaxy နည်းပညာ Technology_Internet ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Sony Ericsson က ပရိုဆက်ဆာ 64-နည်းနည်းက Windows OS ကို-STORE Software များ စီပီယူ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စမတ်ဖုန်းများ HTC က